ကန်တော်ကြီးကအတွဲနှင့်အင်းလျားကန်က အတွဲ ဘာကွာသလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကန်တော်ကြီးကအတွဲနှင့်အင်းလျားကန်က အတွဲ ဘာကွာသလဲ
ကန်တော်ကြီးကအတွဲနှင့်အင်းလျားကန်က အတွဲ ဘာကွာသလဲ
Posted by moonpoem on Aug 9, 2011 in Creative Writing, Short Story | 31 comments
ရန်ကုန်မြို့ တွင် ကန်တော်ကြီးနှင့် အင်းလျားကန်ရှိရာတွင် နှစ်ခုစလုံးသည် စည်ကားလှပါသည်။
ကန်တော်ကြီးကတော့ ကျွန်မအထင်ပြောရမည်ဆိုလျှင် ၀င်ပေါက်များစွာ ရှိသည့်အနက် မျှော်စင်ကျွန်းရှိရာ
၀င်ပေါက်သည် အစည်ကားဆုံးဖြစ်မည် ဟုထင်ပါသည်။ ကျွန်မသည် မကြာခဏဆိုသလို
မြို့ထဲမှ အလုပ်သွားရာတွင် ဗဟန်းသုံးလမ်းမှတ်တိုင်ကို ဖြတ်ရခြင်း၊ ရတနာပုံတယ်လီပို့ကို သွားရာတွင်
မာလာမှတ်တိုင်ကို ဖြတ်ရခြင်းတို့ကြောင့် ထိုကန်နှစ်ခုလုံးကို ဖြတ်သွားတိုင်း ကြည့်မိပါသည်။
ကြည့်မိတိ်ုင်း မပြောင်းလဲသည့်မြင်ကွင်းကတော့ လက်ချင်းချိ်တ်ပြီး လမ်းလျှောက်နေသောအတွဲများ၊
ထီးဆောင်းပြီးထိုင်နေသော အတွဲများ၊ပုံစံမျိုးစုံ စတိုင်မျိုးစုံသာဖြစ်ပေသည်။ ကန်တော်ကြီးကတော့
မိသားစုတွေ ကလေးတွေရော လာတတ်သည့်နေရာဖြစ်သည့်အတွက် အင်းလျားကန်လောက်တော့
အတွဲတွေက အခြေအနေဆိုးမည်ဟု မထင်ပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကျွန်မတို့ အိမ်ကို ဧည့်သည်လာသော
အခါ လူကြီးပိုင်းဖြစ်ပါက ရွှေတိဂုံဘုရားကို ပို့ ရသည်မှာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းသလောက်
လူငယ်နှင့်ကလေးများက သူတို့ ဗွီဒီယိုကားထဲတွင် ကြည့်ရလေ့ရှိသော ကန်တော်ကြီးနှင့်
အင်းလျားကန်က အကြော်ဆိုင်ကို ပို့ခိုင်းသောအခါ တော်တော် စိတ်ညစ်ရပါသည်။
မပို့ ချင်ဟုပြောလျှင်လည်း သူတို့ မိဘတွေက တစ်မျိုးထင်ဦးမည်။ အခြေအနေကိုရှင်းပြကာမှ
ပိုစိတ်ဝင်စားပြီး သွားချင်နေရင်လည်း ခက်ဦးမည်။ အဲဒီတော့ ကျွန်မသည် အမြဲတမ်းလိုလို
ကန်တော်ကြီးရှိ ကလေးများ ကစားတတ်သောနေရာ ရွှေတိဂုံဘုရားကို လှမ်းပြီး ဖူးရသော
ခုနကပြောသလို အင်းလျားကန်သည် ညနေဘက်လမ်းလျှောက်ချင်သူများအတွက် အဆင်ပြေမည်
ဖြစ်သော်လည်း မိသားစုနှင့် သွားမည်ဆိုပါက သင့်တော်မည် နေရာမဟုတ်ဟု ထင်ပါသည်။
ကန်တော်ကြီးကတော့ မဆိုးလှဟုလည်း မြင်ပါသည်။ ကဲ သူငယ်ချင်းတို့ ရော ဘယ်လိုထင်ကြသလဲတော့
မသိ။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ့်ထင်မြင်ချက်ကို ပြောပြလိုက်ပြီ။
ကန်တော်ကြီးမှာ ချောင်ထဲမှာဆိုရင်တော့ …..
ကားတွေ ရေစပ်နားကို ထိုးထားရင် …
နေရာမရှိလို့ ရှိတဲ့နေရာလေးမှာ ထီးလေးကိုကွယ် လောကကြီးကိုမေ့ထားပြီး …
အဲ့ဒီလို သွားထိုင်တဲ့ အသက်ရွယ်အပိုင်းခြားက ဆယ်ကျော်သက်နဲ့ နှစ်ဆယ် စွန်းစွန်းလေးတွေများပါတယ်… ။
အဲ့ဒီအရွယ်လေးတွေက အိကျိအိကျိ ကွိကွိစိစိ အီစီကလီပြောတဲ့ စကားတွေအပေါ် သာယာမိနေကြတဲ့ အရွယ်မျိုးပေါ့ … ။ ယုံတမ်းစကားတွေ လျှောက်ပြောပြီး … စိတ်ကူးယဉ်လို့ကောင်းနေတဲ့ အချိန်လေ … ။ (ကိုယ်တွေ့ မဟုတ်ပါဘူး … စပ်စုထားတာပါ ) ။ ကန်တော်ကြီးကတော့ …သွားရတာ နည်းနည်း ပိုခြုံများမယ်ထင်တယ်နော် … ။ ကန်ဘောင်ကတော့ … ကွယ်စရာခြုံကလည်း နည်းတယ် …. ။ ကန်တော်ကြီးထဲကို ကားနဲ့ပဲ ဖြတ်ဖူးပေမဲ့ (ညီမလေးတွေကို လိုက်ပို့တာပါ ) … အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်တော့ … ထိပ်စ ထိပ်ဆုံး နှစ်ခါလောက်လျှောက်ဖူးတယ်… ။
အင်းယားကန်ဘောင်မြက်ခင်းမှာ ထိုင်ပြီး လေတဖြူးဖြူးနဲ့ …. ဘီယာသောက်ရတဲ့ အရသာက … ဘာနဲ့မှ မတူအောင် relax ဖြစ်တယ် …။ ဒါပေမဲ့ … အလွန်ကျွံတော့ မသောက်နဲ့ပေါ့နော် … ။
အင်းလျားကန်က စုံတွဲရေချိန်မြင့်တဲ့သူတွေသွားတာများတယ်။ ထိုင်ခုံထိုင်သူတွေက သိပ်မဆိုးပါဘူး။ ကျွန်းတော ဘက်တော့ မသွားနဲ့ပေါ့။ သွားပြီးရင်လည်း ဘေးဘီမကြည့်နဲ့ပေါ့။ ကြည့်ရင်လည်း………xxxxxxxx………xxxxx……..။
Group လိုက်သွားလျှင် ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကွ … အဖွဲ့လိုက် ၀ိုင်းထိုင်လိုက်လျှင် အတွဲလေးလည်း ပြေးရော.. ဒီတော့ကိုယ်တွေအုပ်စု နေရာရရော … အဟဲ …
ရေချိန်မြင့်တဲ့လူတွေကတော့.. အင်းယားကန်လောက်သွားပါတော့မလားဟင် …. ဒါလည်း တွေးစရာပဲ
ကွန် မန့် ဖတ်ပြီး မှ အသေးစိတ် ပိုသိသွားပြီ
ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ကန်ဘောင် ညနေတိုင်းရောက်တယ်။ ဘယ်မှတော့ မကြည့်ဖြစ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နောက်လိုက် ပြောင်လိုက်နဲ့ စားလိုက်သွားလိုက်ပါပဲ။ ကန်တော်ကြီးကျတော့ ၀င်ကြေးပေးရတာ ဈေးကြီးတယ်လေ။ ဒီတော့ နည်းနည်းတော့ လူသန့်သွားတာပေါ့ဈေးလေးနဲ့ကန့်လိုက်တော့ နောက်တစ်ချက်က အတွဲတွေအတွက် ကန်တော်ကြီးက နေရာသိပ်မရှိတာလည်းပါမယ်ထင်တယ်။ ကန်ဘောင်ကျတော့ ည ၉ နာရီသာ ပိတ်တယ်ပြောတာလေ မိုးရွာရွာ နေပူပူ အမြဲစည်နေတာပါပဲ။
ကန်တော်ကြီးက နေ့ခင်းဘက်ဆို ဆိုင်တွေက ပေါတာ့
ဘယ်နေရာကကြည့်ကြည့် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း
မြင်ရလို့ သိပ်မဆိုးလှပင်မယ့် ကန်တော်ကြီးလဲ အတွဲများ ညဘက်ဆို ဆိုးသာပါပဲလေ
သူတို့တွေက ကားလေးတွေနဲ့ လာပြီး မှောင်ရိပ်မှာပေါ့
ညဘက်ဆိုတော့ သိပ်လဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မမြင်ရတော့ အဆင်ပြေတာပေါ့
အတွေ့အကြုံရှိနေတာ ဟုတ်ဘူးနော် … အိမ်နဲ့နီးတော့ ပူအိုက်တဲ့ ညဘက်တွေ ခဏခဏ
သွားဖြစ်လို့ မြင်နေတာလေး ရေးပြတာ …
tu lal one day tot twar mhar pal koe .. ha ha
အင်း …. ရန်ကုန်မြို့လယ်မှာတောင် မိသားစု အတူသွားလို့ မရတဲ့ နေရာရှိနေတာကိုးးးးးး
အမှန်ကတော့ အတွဲများအတွက် သီးသန့်ပန်းခြံထားသင့်ပါတယ်။
ဒါဆို သူတို့လဲအေးဆေး မမြင်ချင်သူလဲမတွေ့ရ။
ုဒါမျိုး မကြည့်ချင်ရင် ၀င်မလာနဲ့
တင်ပြမယ် ဆက်လက်တင်ပြမယ် ဒီလိုပန်းခြံထား သင့် လုပ်သင့်တဲ့အကြောင်း
တချို့ နိုင်ငံတွေမှာ အတွဲတွေအတွက် love hotel တရားဝင် ရှိတယ်
(ဒီမှာ ကတော့ တရားမ၀င်ဖွင့် ကြတာပေါ့)
ဒီမှာ “ချစ်သူ့ပန်းခြံ” လေးတွေ တရားဝင် ဖွင့်ရင်ကောင်းတာပေါ့ အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ လွတ်လပ်ပြီး အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ထိန်းပြီးသားလဲ ဖြစ်မယ်
ဟိုတစ်လောကတောင် ပို့စ် တစ်ခုမှာ တွေ့သေးတယ် ချစ်သူတွေအတွက် ကော်ဖီဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုပဲ
ချစ်သူပန်းခြံလုပ်ဖြစ်ရင် အတွဲမပါမ၀င်ရဆိုတော့ အတွဲချောင်းချင်တဲ့လူတွေ အတွဲငှားဝင်ရင်ရော??
မိန်းကလေးကို ငှားလို့မရရင် ယောက်ျားလေးချင်းနားလည်မှုယူပြီး (တစ်ယောက်က အခြောက်လုပ်)ပေ့ါနော်
ဒီခေတ်က အခြောက်နဲ့ ယောက်ျားနဲ့ ပေါ်တင်တွဲနေကြတော့
ကိုပေါက် ရေးထားတဲ့နေရာ ကိုတော့ ခိုက်သွားပြီဗျို့ ….
အဲ့လိုနေရာမျိုး ရှိသင့်တယ် ………
အင်း ကြည့်တဲ့သူရဲ့ အမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပါလိမ့်မယ်။လက်တွေ့ ချောင်းကြည့်ရတာဝါသနာတအားပါတယ် ဟိ ဟိ
ကိုယ်ချင်းစာ တရားကို လက်ကိုင်ထားပြီး
ကိုပေါက်ပြောသလို နေရာလေးတွေ ရှိသင့်ပါတယ်
အမျိုးသမီး များ အနေနဲ့ ကတော့
ကိုယ့် ကို တစ်ကယ်ယူမှာ သေချာတဲ့ ချစ်သူကို မှ
လိုက်လျောသင့်တယ် လို့ ထင်မိပါကြောင်း
ရွှေတိဂုံ ဘုရား ခြေရင်းက သိဂုင်္တ္တရ ဦးယျာဉ် ကို သွား.. စိမ်းစိမ်းစိုစိုနဲ့ လေကောင်းလေသန့်လည်း ရတယ်။
ကလေးတွေပါရင် ပေါင်မုန့်တွေ ၀ယ်သွား.. ငါးစာကျွေးရလို့ ကလေးတွေလည်း ပျော်မှ ပျော် ဖြစ်လိမ့်မယ်။
အဆင့်တစ် တွေက ကန်ဘောင်သွားခုံမှာထိုင်တာ
အဆင့်နှစ်ဆို ကန်ဘောင်မှာမထိုင်ဘူး ခြုံကွယ်လေးတွေတိုးကုန်ရော
ဒါဆိုရင် တားတားက အခုမှ အဆင့်0တောင် မစရသေးပါလား
ရန်ကုန်မှာလည်း Love Garden ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Happy World က ဖွင့်ထားတာလေ ။ စဖွင့်ခါစက အလကားပေးဝင်သေးတယ် … နောက်ပိုင်းကျတော့ ၀င်ကြေးကောက်တယ် အထဲမှာ တဲလေး တွေ ကို အမိုး တွေအကာတွေနဲ့တပ်ပေးထားတယ်။ အခု တော့ ဘယ်က တိုင်လို့လဲ မသိဘူး အကာတွေပြန်ဖြုတ် လိုက်ပီဆိုလား ပြောကြတာပဲ… Love Garden ထဲက တဲတွေမှာ အတွဲတွေ က အပြည့်ပဲနော် …
အလကားဝင်ရတုန်းကတော့ ပျော်စရာကောင်းလို့သွားဖြစ်တယ် …ကစားစရာတွေ ဘာတွေရှိတယ်
အခုကျတော့ တဲတွေပဲလုပ်ပစ်လိုက်တယ် … အတွဲတွေချည်းပဲ ဆိုတော့ သွားကစားလို့ မကောင်းတော့ဘူး။
အဲ…သတင်းထူးပဲ … ကြားတောင် မကြားဖူးဘူး … ။ ဟက်ပီးဝေါလ်က စီးပွားရေး အကွက်မြင်ပါ့ … ။
ဒါနဲ့ … မြကျွန်းသာမှာလည်း အဲ့ဒါမျိုး ရှိမယ်ထင်တယ်… ကွမ်းယာဆိုင်လောက် ရှိတဲ့ အိမ်ပုလေးတွေကို နာရီနဲ့ ငှားရတာလေ … ။ ကိုယ်ကတော့ မသိလို့ …. အိမ်သာလေးတွေမှတ်တာ… အဒေါ်တွေက ပြောပြမှ အဲ့ဒါအတွဲတွေ ခဏနားတဲ့နေရာမှန်းသိတာ … ။ ပြောမဲ့သာ ပြောတာ .. တသက်နဲ့ တကိုယ်.. အိကျိအိကျိနဲ့.. လူကွယ်ရာမှာ ထိုင်ပြီး မကြူဖူးဘူး :P(အာညောင်းတယ်) … အိကျိအိကျိ ပြောချင်လား .. ရတယ် … စားလို့သောက်လို့ ရတဲ့ ဆိုင်တခုမှာ သွားထိုင်တယ် … ဘေးကလူက ပြောချင်တာပြော … ကိုယ်က ကြားတချက်မကြားတချက်နဲ့ … စိတ်က စားစရာထဲမှာပဲ …
တရုတ်ပြည်မှာနေတုန်းက စိတ်ထဲမွမ်းကြပ်တဲ့အခါတိုင်း ပန်းခြံတွေ လျှောက်လည်ဖြစ်တယ် … အတွဲတွေ သိပ်မတွေ့ရပဲ ကလေးလေးတစ်ယောက်ပါတဲ့ မိသားစုတွေ အလာများပါတယ် … စက်ဘီး ၃ ယောက်စီးတွေနဲ့ ပန်းခြံထဲမှာ ပတ်စီးနေကြတာ ကြည်နူးစရာကောင်းတယ် … အသက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေက ကျန်းမာရေးအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ကြတယ် …
အခုရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့ ပန်းခြံသွားလည်ချင်ပေမယ့် ပန်းခြံဆိုတာ အတွဲတွေသွားတဲ့နေရာလို့ သတ်မှတ်ထားသလိုဖြစ်နေတော့ …
aku mhar pe’ sone sone lin lin ti twer tot tal
များသောအားဖြင့်တော့ ဒီလိုနေရာကို အတွဲတိုင်းသွားကြတာပါပဲဗျာ.. ပြောလို့မရဘူးပေါ့ ဟိဟိ (ကျွန်တော်လည်းအပါအ၀င်ပေါ့)
သြော် ငါက ၂နေရာပဲ သိတယ် သူငယချင်းတွေက မထသ လိုင်းစုံ ထက်တောင် ပိုစုံ နေပါသေးလား
တစ်ကယ်တန်းပြောရရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ယောကျားတစ်ယောက်နဲ့ မိန်းမတစ်ယောက် သဘာဝအရ ချစ်ကြိုက်ကြခြင်းကို လိုက်ကြည့်နေတတ်ကြလို့ ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်မြင်ပါတယ်.. ဒါကြောင့် တူရာ တူရာ နေရာတွေမှာပဲ စုဝေးနေကြခြင်းလို့ပဲ မြင်ပါတယ်.. ပြောရရင် လူတစ်ယောက်ရဲ့ လွပ်လပ်ခွင့်ကို မလေးစားတတ်ကြသေးတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်ကြောင့် ဒီလိုမြင်နေ၊ပြောနေကြတယ်ပဲ မြင်မိပါတယ်.. သူ့လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ သူပါပဲ..
ဒါကတော့ ယဉ်ကျေးမှုအမြင်နဲ့ ကြည့်မယ်ဆို မတင့်တယ်ဘူးလို့ မြင်တယ်လေ။
လွတ်လပ်ခွင့် ရှိတာနဲ့ ၊ အရှက်မရှိတာ က တခြားစီပါ